“Checkmate” ပဉ္စမမျိုးဆက် ဂျက်တိုက်လေယာဉ်သစ်ကို ရုရှားက ပထမဆုံးထုတ်ဖော်ပြသ - Xinhua News Agency
မော်စကို ၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့စွန်၌ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာလေကြောင်း နှင့်အာကာသဝန်ဆောင်မှုပြပွဲ (MAKS)-2021 တွင် ၎င်းတို့၏ ပဉ္စမမျိုးဆက် အပေါ့စား အင်ဂျင်တစ်လုံးတပ် ဂျက်တိုက်လေယာဉ် “Checkmate” ကို ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်း သိရသည်။လေယာဉ်တစ်စင်းလုံးကို အပြည့်အဝ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသစ်ဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားပြီး မြင်နိုင်စွမ်းလျော့ကျစေရန် ကိုယ်ထည်ရောင် ခပ်မှိန်မှိန် ၊ အမြင့်ဆုံးပျံသန်းမှုစွမ်းဆောင်ရည် နှင့် လေယာဉ်မှူးအတွက် ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာအထောက်အကူပြုစနစ်များ တပ်ဆင်ပေးထားကြောင်း ယင်းလေယာဉ်အား တီထွင်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့သည့် ရုရှားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံပိုင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Rostec က ဆိုသည်။
“Checkmate” ပဉ္စမမျိုးဆက်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်သစ်တစ်စင်းကို ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်က ခင်းကျင်းပြထားစဉ်(ဆင်ဟွာ)
စစ်တုရင်ပွဲသိမ်းကွက်“Checkmate” ဟုအမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါ ပဉ္စမမျိုးဆက်တိုက်လေယာဉ်သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ ပဉ္စမမျိုးဆက် အကြီးစား အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ် Su-57 ဖိုက်တာ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွင် အသုံးပြုထားသော အင်ဂျင် နှင့် လေယာဉ်ပျံသန်းရေးအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာများကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားကြောင်း ၊ ယင်းမှာ ဂျက်လေယာဉ်သစ် တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုမိုလျင်မြန်ထိရောက်စေကြောင်း Rostec ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Sergei Chemezov က ပြောကြားခဲ့သည်။
Checkmate ဂျက်လေယာဉ်တစ်စင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း မှ သန်း ၃၀ အထိ ရှိနိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာ စစ်လက်နက်တင်ပို့မှုဈေးကွက်တွင် လက်လှမ်းမီနိုင်သော ဈေးနှုန်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါတိုက်လေယာဉ်များကို ဝယ်လက်များဆီသို့ ပထမဆုံးမတင်ပို့မီ ၅ နှစ်ခွဲခန့်အချိန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ဗလာတီမာပူတင်သည် Checkmate ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ပထမဆုံးထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့် MAKS လေကြောင်းပြပွဲသို့ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်က သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
MOSCOW, July 20 (Xinhua) — Russia displayedaprototype of its fifth-generation lightweight single-engine fighter jet “Checkmate” at the International Aviation and Space Salon (MAKS)-2021 that kicked off inaMoscow suburb on Tuesday.
The Checkmate will use the same engine and avionics as Russia’s fifth-generation heavyweight twin-engine fighter Su-57, which ensures the speedy development of the new jet, Rostec CEO Sergei Chemezov said.
Photos – A prototype of the fifth-generation fighter jet “Checkmate” is on display inaMoscow suburb, Russia, on July 20, 2021.